Sublimation of damacyada - AFRIKHEPRI
Sifeynka ah ee riyooyinka
Asalka tirooyinka iyo sirta sarakicidda
Welcome TEXT OF MATTHIEU GROBLI
Subimeynta ee xiisaha
L 'Shakhsiyaadka isku heysta gacanta cadhada oo iskudaya inay xakameeyaan, cadaadiyaan ama ka adkaadaan, ayaa si aan macquul aheyn u gaarin naftooda xaalad khilaaf: halganka waxaa lagu aasaasayaa labo dareen diidmo. Cadho waxay rabtaa inay isu muujiso nooc rabshad laakiin waa ay ka kooban tahay.
Cadaadiskaasi wuxuu horseedaa isu dheelitir la'aanta nafta iyo soo bixitaanka cudurada. Sababtoo ah tamarkan xun wuxuu u dhaqmaa sidii sun ah wasakhaynaysa maskaxda oo markii dambe sababaya xanuunno nafsi ah.
Laakiin, waa inaan diidno rabitaannadayada cayiman ee bulshada dhexdeeda. Markaa waa inaan astaan ​​u muujinaa si markaa qaabkan hoose ee loo yaqaan 'prima materia' uu u aqbali karo dadka oo dhan.
Farshaxanka farshaxanka, waxaan uusoo gudbinaa niyaddeena murugo-falalka leh waxaan uga mahadcelineynaa wanaagga dhagaxa falsafada waxaanan ka xayuubinaa murugadeena, walaackeena iyo silica aan u leenahay inaan gashano jaakad cusub oo hub ah: taas oo ah suuxinta. Waa iyada oo loo marayo geedi socodkan alkeemikada in aan hoos u dhigno tamarteenna xun, oo aan u beddelayno oo aan u beddeleyno tamar wanaagsan oo hal abuur leh.
Markaa, xorriyadda qawlka ayaa loo doorbidayaa cadaadis iyo cadaadis maxaa yeelay ninka ku hoos jira harqoodka addeecda waa sida bahal u diyaarsan inuu ugaadha ugaadhsado. Xanaaqnimadiisa waxay kaliya u tarjumaysaa rabshado maxaa yeelay isagu ma leh meel uu ka baxo oo kuma baabiin karo madxafka farshaxanka.
Hawlgalkan oo lagu muujiyey abuurista shaqo farshaxan waa qaabkii ugu horreeyay ee sublimation ee tamar. Runtii, sawirrada darbiyada godadka ay sameeyeen awowayaasheen ayaa ah muujinta ugu horeysa ee dareen badbaadin. Hawlaha farshaxanimada ayaa markaa suurtogal ka dhigaya in loo beddelo geeridayada darawalnimada sawir abuur leh. Sawiradan sawirradu waxay lahaayeen cabbir aad u sarreeya oo ah: oo ah beddelaadda geerida loo weeciyay dariiqa nolosha ee hoos yimaadda magaca cusub ee Aabbaha.
Markaa, bulsho isku-dheelitiran waxay u oggolaaneysaa sheegidda rabitaanka muwaadiniinteeda si ayan u baabi'in. Laakiin mujtamac xanuunsan ayaa kaliya mashruucan geerida kudhaca jiida dagaalka oo aakhirka iskiis u burbura.
Asalka astaamaha diinta
La'aanta miyirka iyo jiritaanka jiritaanka